Maareeyaha Guud Keskin wuxuu baarayaa Gegada Diyaaradaha 3aad ee Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMaareeyaha Guud Keskin wuxuu baarayaa Gegada Diyaaradaha 3-aad ee Istanbul
25 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Ma la tijaabin doonaa guud ahaan garoonka diyaaradaha ee Istanbul?
Maareeyaha Guud ee Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) iyo Gudoomiyaha Gudiga Hüseyin Keskin ayaa baaray howlgalada sadexaad ee wadooyinka mara garoonka diyaaradaha ee Istanbul.
Maareeyaha Guud ee Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka (DHMİ) Maareeyaha Guud Hüseyin Keskin ayaa bayaan uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee twitter-ka; “Buuxinta waxay ka shaqeysaa wadada saddexaad ee garoonka diyaaradaha ee Istanbul iyo shaqooyinka la taaban karo ee ka socda gobollada De-icing apron iyo De-icing apron ayaa sii socota. Wadada saddexaad, oo sidoo kale si weyn hoos u dhigi doonta wakhtiyada tagaasida iyo qiiqa kaarboonka, ayaa duullimaadyo cusub u soo qaadi doonta garoonka diyaaradaha Istanbul.
Howlaha buuxinta wadooyinka saddexaad ee garoonka Diyaaradaha Istanbul iyo shaqooyinka la-taaban karo ee ka socda Taksiyada End-Around iyo gobollada De-icing way sii socdaan. Wadada saddexaad, oo sidoo kale si weyn hoos u dhigi doonta wakhtiyada taksi iyo qiiqa kaarboonka, ayaa duullimaadyo cusub u keeni doonta garoonka diyaaradaha ee Istanbul. Xarunta Xakamaynta Gaadiidka Cirka ee Gobolka, Dhismaha Gawaarida Hawada iyo Dhismaha Dhismaha ARFF, oo ay tahay in lagu dhammeeyo wadada laamiga ah, ayaa isla markale lagu dhameystiri doonaa wadada saddexaad ee laamiga ah. ”
Kaaliyaha Agaasimaha Guud Apaydın wuxuu baaray IZBAN Line
Hase yeeshe xilliga gaaban ee garoonka diyaaradaha
Hüseyin Keskin, 3. Garoonka diyaaradaha ayaa noqon doona mid saaxiibtinimo leh
3 in Antalya. madaarka, gawaarida xiga iyo tareenka xawaaraha sare
Madaarka Rize Artvin wuxuu noqon doonaa mitirada 3 ee mitirka 45
Hawlaha Asphalt ayaa bilaabay wadiiqada weyn ee 3.
Duulimaadkii labaad ee orodka saddexaad ayaa la dhammeeyaa dhamaadka sanadka
Kars Harakani Airport Second Run 30 Waxay furan doontaa kahor bisha Oktoobar
70% Sabiha Gökçen Airport-ka Labaad Oo La Dhamaystiray
TCDD 3. Ku xigeenka Agaasimaha Gobolka ee Copper Torbalı-Selçuk
Gegada dayuuradaha ee saddexaad ee Istanbul